‘जीन्दगीले मसँग दोस्रो पटक खेल खेल्यो’- नायिका श्वेता खड्का::Leading Nepal News
‘जीन्दगीले मसँग दोस्रो पटक खेल खेल्यो’- नायिका श्वेता खड्का
बैशाख १६, काठमाडौं । नायिका श्वेता खड्का अहिले भारतको एक अस्पतालमा छिन् । उनी दिल्लीको बीएलके सुपर स्पेसियालिटी अस्पतालमा भर्ना छिन् । उनको हालै शल्यक्रिया गरेर ट्युमर निकालिएको छ । शल्यक्रिया सफल भएपछि उनले दोस्रो जीवन पाएको बताएकी छिन् । श्वेताले सोमबार बिहान आफ्नो आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टमा यसबारे जानकारी दिँदै जीवनले आफूसँग दोस्रो पटक खेल खेलेको बताएकी छिन् ।
फिल्म ‘हेलो जिन्दगी’ को सुटिङका लागि लण्डन पुगेकी उनलाई स्वास्थ्यमा खराबी देखिएपछि अचानक दिल्ली पुर्याइएको थियो । लण्डन उड्नु अघि घाँटी र चिउँडो वरिपरि दुखेर अस्पताल जाँदा ‘ट्युमर हो र त्यसलाई केही समयपछि निकाले हुन्छ, अहिलेका लागि खासै ठूलो समस्या होइन’ भनेपछि ढुक्क भएर लण्डन गएको उनले बताइन् ।तर अचानक स्वास्थ्यमा खराबी देखिएपछि तत्कालै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने डाक्टरको सल्लाहमा आफू दिल्ली पुगेको उनले फेसबुक स्टेटसमा जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘लण्डनमा केही दिनको सुटिङपछि एकाएक मलाई घाँटी र चिउँडोमा निकै पीडा हुनथाल्यो, ज्वरो पनि बेस्सरी आयो । मलाई तत्काल दिल्ली लगियो । डा. सुरेन्द्र कुमार दबासले ‘रोबोटिक सर्जरी’ गरे र नेपालबाट डा. पंकजले सबै व्यवस्था मिलाइदिएपछि शल्यक्रिया सफल भयो ।’
उक्त घटनापछि आफूले जीवनबारे अर्को पाठ सिकेको उनी बताउँछिन् । ‘कहिले के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, जीवनले कता डोहोर्याउँछ, त्यो पनि थाहा हुँदैन ।’उनले डरलाग्दो अवस्थालाई आफूले पुनः जीत्न सफल भएको उनले बताइन् ।तस्वीर : श्वेताको फेसबूकबाट